ဘာသာခြားတစ်ယောကါကို နိဗ္ဗာန်အကြောင်းကို ဖြေရှင်းပြခြင်း
မေးခွန်း ။ ။
ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ နိဗ္ဗာန်ဆိုတာ ဘယ်မှာလဲ ပြပါ ? ဘာကို နိဗ္ဗာန်လို့ ခေါ်တာလဲ ?
ဘာမှမရှိတာကို နိဗ္ဗာန်လို့ ခေါ်တာလား ? နိဗ္ဗာန်ဆိုတာ စိတ်ကူးယာဉ်မှု တစ်ခုပါ ?
ဖြေဆိုချက် ။ ။
ကျွန်တော့်အနေနဲ့ဘာသာခြားအစ္စလာမ်ဘာသာဝင် မွတ်စလင်သူငယ်ချင်းများ
မေးသော နိဗ္ဗာန်နှင့်ပတ်သက်တဲ့ ဖြေရှင်းမှုကို ဘာသာခြားများပါ နားလည်လွယ်အောင် ၊
ဖြေရှင်းချက် ပုံစံ ၃မျိုး နဲ့ဥပမာများဖြင့် ဖြေရှင်းပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ပေါ်လာတဲ့ မကောင်းတဲ့စိတ် အကုသိုလ်စိတ်တွေကို
ကျန်းမားရေးကောင်းမယ်၊ ကုသိုလ် စိတ်တိုးမယ်။
အမှိုက်ဆိုတဲ့ အရာက ကြာလေ ပုပ်လေ အနံ့ဆိုးထွက်လေပါပဲ၊
၁။ လုံးစုံများစွာ သတ္တဝါ ချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေ။
၂။ ကြောက်တတ်၊ မကြောက်တတ်၊ ၂ရပ်များစွာ၊ သတ္တဝါ ချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေ။
၃။ မြင်အပ်၊ မမြင်အပ်၊ ၂ရပ်များစွာ သတ္တဝါ၊ ချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေ။
“ ရာဟုလာ ... ရေခွက်ထဲ၌ ရေအနည်းငယ်ကို မြင်ရဲ့လား ?။”
ရာဟုလာ။ ။ မြင်ပါသည် အရှင်ဘုရား။
ဆိုလိုပါသည်။ အသက်အရွယ်အားဖြင့်မဆိုင် ၀ိပဿနာအားထုတ်ရန် စဉ်းစားခန်းဝင်နေသူတို့
- သူများအသက် မသတ်နဲ့။
(၂) အဒိန္နံ နာဒါတဗ္ဗံ -
ကျေးဇူးတော်ရှင် ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ဘာသာတရား ဆောင်ပုဒ်များ(၁၂)။
ရှုစရာ၌၊ စိတ်ကိုစိုက်၊ ဦးတိုက်ထားပါလေ။
ဖောင်းတာပိန်တာ၊ အစဖြာ၊ ပေါ်ရာ ရှုပါလေ။
စိတ်ပြေးစိတ်လွင့်၊ မထိန်းနှင့်၊ အသင့်ရှုပါလေ။
မြတ်စွာဘုရားရှင် လက်ထက်တုန်းက သာမာဝတီမိဖုရားထံဝယ် ခါးကုန်းနေသော ကျွန်မ တစ်ယောက်ရှိ၏။ ၎င်းအမည်မှာ ခုဇ္ဖုတ္တရာ (ခါးကုန်း) မည်၏။ ၎င်းအား မိဖုရားမှ နေ့စဉ် ရှစ်အသပြာဖိုး ပန်းကိုဝယ်ခိုင်း၍ ဘုရားပန်းအိုးများကို လဲလှယ်စေ၏။ တစ်နေ့ ပန်းသည်၏ အိမ်၌ မြတ်စွာဘုရားကြွ၍ တရားချီးမြှင့်တော်မူစဉ် ကြုံကြိုက်၍ ပန်းဝယ်လာသူ ကျွန်မသည် တရားတော်ကို ရိုသေစွာ နားကြားခွင့် ရလိုက်လေသော် အလွန်ဉာဏ်ပညာ ကြီးရင့်ထက်မြက်သော ကျွန်မ ဖြစ်သဖြင့် ချက်ခြင်းပင် သောတာပန် တည်လေ၏။
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 10:51 AM No comments:
“မခွဲမခွာ ဘဝဆက်တိုင်းတွေ့လိုတဲ့ ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးကို မြတ်စွာဘုရားက ပေးတဲ့နည်း”။
မှန်သမျှ ဘယ်လူမျိုးမဆို ရနိုင်တဲ့ စူဠသောတာပန် အဖြစ်ကိုတော့ သာသနာတော်နဲ့ ကြုံတွေ့
ထားပါတယ်။ ဘုရားဟောတဲ့ တရားတော်တွေဟာ နိဗ္ဗာန်ကို ဦးတည်တယ် ဆိုပေမဲ့
၂။ ပယ်ရမယ့်တရား။ ။ ထိုဒုက္ခသစ္စာဖြစ်သော ခန္ဓာငါးပါး ရုပ်နာမ်တရားတို့ကို
ဒုက္ခဟုမသိ၍ မိမိ လိုချင်တပ်မက်မှု= တဏှာ၊ စွဲလမ်းမှု= ဥပါဒါန်၊ ရချင်လို့လုပ်တဲ့
အရင်က တောရွာတစ်ရွာရဲ့အနီးမှာ တောရဆောက်တည်နေတဲ့ ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါး ရှိသတဲ့..... ဆရာတော်ကြီးဆွမ်းခံကြွတဲ့အခါမှာ ရွာနဲ့ အတော်လေးလှမ်းသတဲ့. . . ဒါကြောင်း ဆရာတော်ကြီးကို အလွန်ကြည်ညိုသူ ဒကာတစ်ဦး က ဆရာတော်ကြီးကြွလာချိ်န်မှာ အမောပြေ၊ အဆာပြေ ဘုဉ်းပေးဖို့ ရေနွေးကြမ်းနဲ့ ခဲဖွယ်တစ်ခုခုကို အမြဲစီစဉ်ထားပြီး သူ့အိမ်မှာ တစ်အောင့်တစ်ခဏနားနေ ဘုဉ်းပေးဖို့ အမြဲ ပင့်လျှောက်ပါသတဲ့. . . နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ထိုင်အိမ်သဘောမျိုးနဲ့ ဆရာဒကာ
(အရှင်စ၀်ဆုခမ်း) ဖြေ ။ သေဆုံးသွားတဲ့သူတွေ တချို့ရနိုင်တယ်။ တချို့ မရနိုင်ဘူးလို့ပဲ ဖြေရပါမယ်။
စီးပွါးရေး၊ ဘဝအခြေ မြင့်မားရေးတို့ အတွက် လောကီအစီအမံဖြင့် တစ်ပွဲထိုးရှာကြံလိုသူ ပေါများလျက်ရှိ၏ သိဒ္ဓိတင်ထားသည်ဆိုသော ပစ္စည်းများကို 'ဆောင်' ထားလျှင် 'အကျိုးပေးသည်'၊ "အကြံအောင်သည်" ဟူ၍လည်း အယူရှိကြ၏။ သိဒ္ဓိတင်စ္စည်း ရောင်းဝယ်မှုကို စီးပွါးရေး
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 11:33 AM No comments:
တော်အရှင်မြတ်များအား ဦးဇင်းတို့က ၀ါဆိုသင်္ကန်း၊ ထီး၊ ဖိနပ် အစရှိသော လှူဘွယ်ပစ္စည်း (၁၆)
၄။ သမ္မာကမ္မန္တော = ကာယဒုစရိုက်သုံးပါးမှ ကြဉ်၍ ကောင်းသောအမှုလုပ်ခြင်း။
ရဲဝံ့လေစွာ ယမမင်း၏ တူလော- သားလော- ဆွေမျိုးလောဟု မေးထိုက်၏။
ကို ရှာဖွေမှ တကယ့်အရေးကြုံလာတဲ့အခါမှာ ကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေ ဖြစ်နိုင်သလဲဆိုတာ ဘ၀အရေးနဲ့ 
(၃) - မဟာယာန ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဟာ အသား မစားကြဘူး မဟုတ်လား။
တဖန် ထိုပါရာဇိက ကျသူများ၊ မဂ်ဖိုလ်မှ မတားမြစ်၊ (မဆုံးရှုံးရ) အောင် မည်သို့ဆောင်ရွက်နိုင်ပုံနှင့် သီလရှင်များ ပါရာဇိက ကျနိုင်-မကျနိုင်
ဖြေကြားပေးတော်မူပါ အရှင်ဘုရား။ ( စောရန်နိုင်ထွန်း-တာချီလိတ် )
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 12:01 PM No comments:
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 11:53 AM No comments:
တစ်ဘဝလုံးလဲ သစ္စာမဖောက်ဖူး၊ တစ်သံသရာလုံးလဲ မဖောက်ဖူး၊ အထူးအားဖြင့်
၄။ မုသာဝါဒါ ဝေရမဏိ = မဟုတ်မမှန် ပြောဆိုခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ခြင်း။
ကိုးကွယ်မှုဆိုင်ရာ လုပ်လာကြပါသည်။ အဓိပ္ပါယ်မသိတဲ့သူ ရာနှုန်းပြည့်နီးပါး ရှိပါမည်။ သိလျှင်
သီလဗျသန=အကျင့်သီလ ပျက်စီးမှု။ ဒိဌိဗျသန=အယူဝါဒအမြင်ရဲ့ ပျက်စီးမှုတို့ဖြစ်ကြတယ်။
အေး မဝေက ပြီးပေမယ့် ငါတို့က မပြီးနိုင်သေးဘူး၊ မေးစရာတွေ အများကြီးပဲ မေးရမှာပဲ - -ဆိုတော့ မေးပါ တဲ့။
ဒါနဲ့ စာရေးသူတို့ကလဲ တရစပ် မေးတော့တာပေါ့၊
ပါသည်။ သဒ္ဒါတရားထက်သန်ကြပါသည်။ သို့သော် အများစုမှာ သဒ္ဒါလွန်ကဲပြီး ပညာအားနည်း
အရှင်နန္ဒမာလာဘိဝံသ၏ မဂ္ဂင်ရှစ်ပါး အကျင့်တရားဖြင့် နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို လမ်းညွှန်မှု။
ပြောရမယ်။ ။"သမ္မာကမ္မန္တ"=အပြစ်ရှိတဲ့ အလုပ်ကနေ ရှောင်ကြဉ်ပြီး အပြစ်ကင်းတဲ့
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 8:34 PM No comments:
လဲကျသွားတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကို အနားမှာ ရှိနေတဲ့ သူ့ညီမလေးက ကြမ်းပြင်ပေါ် လဲကျမသွားအောင် ထိန်းပေးရှာတယ်၊ စာရေးသူ တို့မှာတော့ ရင်တထိတ်ထိတ် နဲ့ ဘာတွေ ဆက်ဖြစ်လာမလဲ ဆိုတာ သတိထားကြည့်နေရတာပေါ့ ။
ဖြင့် ဗုဒ္ဓံ- မြတ်စွာဘုရားကို၊ ဓမ္မံ- တရားတော်မြတ်ကို၊ သံဃံ-သံဃာတော်မြတ်
၃။ သက္ကယဒိဋ္ဌိကို ပယ်ခွာနိုင်သဖြင့် သက္ကယဒိဋ္ဌိကြောင့်ဖြစ်ရသော လောဘ၊ ဒေါသ၊ မာန